Bayern Munich, Man City iyo Liverpool, oo guulo gaaray iyo dhamaan natiijooyinka kulamadii caawa laga ciyaaray Champions League… +SAWIRRO – Gool FM
(Yurub) 21 Okt 2020. Waxaa caawa la ciyaaray kulamo ka tirsan heerka group-yada ee tartanka UEFA Champions League, xilli ciyaareedkan 2020/21 iyadoo kooxihii caawa ciyaaray ay ugu muhiimsanaayeen Bayern Munich, Machester City, Real Madrid iyo Liverpool.
Kooxda Bayern Munich ayaa caawa guul gaartay, kaddib markii ay kaga adkaatay naadiga Atletico Madrid 4-0, kulankooda koowaad heerka group-yada ee tartanka UEFA Champions League, waxaana goolasha u kala dhaliyay xiddigaha kala ah Kingsley Coman oo 2 gool ah, Leon Goretzka, Corentin iyo .Tolisso.
Dhinaca kale Kooxda Liverpool ayaa guul muhiim ah kaga daah furatay tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkan 2020/21, kaddib markii ay kaga adkaatay naadiga Ajax 0-1, goolka kaliya ee Reds wuxuu ahaa miduu iska dhaliyay xiddiga ka tirsan Ajax ee Nicolas Tagliafico.
Dhanka kale Manchester City ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda FC Porto oo marti ugu aheyd garoonka Etihad, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-1, waxaana goolasha u kala dhaliyay Sergio Aguero iyo Ferran Torres.
Real Madrid ayaa dhankeeda guuldarro kaga daah furatay kulankeedii ugu horeeyay heerka group-yada ee tartanka UEFA Champions League, xilli ciyaareedkan 2020/21, kaddib markii ay kala kulantay Shakhtar Donetsk guuldarro 2-3 ah.
Haddaba dhanka hoose kaga boggo natiijooyinka kulamadii caawa lagu daah furay heerka Group-yada tartanka xiisaha badan ee Champions League:
Inter 2 – 2 Borussia Moenchengladbach